dimanche, 18 août 2019 19:13
Hotanterahina eny amin’ny CCI Ivato ny 17 ka hatramin’ny faha 20 septambra ho avy izao ny « Wave Madagascar » na Fihaonambe mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara ka mpandraharaha avy any ivelany mihoatra ny dimampolo (50) no ho tonga amin’izany.
Hasaina amin’izany ireo mpandraharaha rehetra izay mety ho liana amin’ny fifanarahana amin’ny fitantanana toerana fandraisam-bahiny, seranam-piaramanidina, seranan-tsambo, fitaterana an-dranomasina sy anabakabaka.
dimanche, 18 août 2019 19:08
Fitaterana anabakabaka: Hamboarana seranam-piaramanidina any Bekopaka sy Ranohira
Anisan’ny laharam-pahamehan’ny fitondrana mijoro ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina any Bekopaka sy Ranohira mba hisarihana mpizahatany bebe kokoa.
Hosokafana amin’ny sidina iraisam-pirenena ihany koa ny seranam-piaramanidina Andrakaka Antsiranana ; efa natomboka ny asa fandinihina ahatongavana amin’izany.
dimanche, 18 août 2019 18:57
Fitateram-bahoaka: Hapetraka ny Fitaterana mailaka
Kendrena ho vita alohan’ny volana desambra 2019 ny fametrahana ity Fitaterana mailaka eto an-drenivohitra ity, izay hampifandray ny La City - Tsarasaotra - Ivato – Talatamaty.
dimanche, 18 août 2019 18:50
Fizahantany: Hatsangana ao Ampefy ny « Village de vacances »
Hatsangana amin’ny velaran-tany sivy hekitara (9 ha) alohan’ny volana desambra 2019 ny Tanàna fialantsasatra (Village de vacances) any Ampefy. Atao izany hoy ny praiminisitra mba hahazoana manatsara sy mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany ary dia harindra manaraka izany ny fanitarana sy fampanarahana fenitra ny foto-drafitr’asa amin’ny fitaterana rehetra.
dimanche, 18 août 2019 18:22
Paositra: Haverina amin’ny toerana tokony hisy azy
Havaozina tanteraka ny Paositra Malagasy ary haverina amin’ny toerana tokony ho hisy azy ny fandraharahan’ny Paositra manerana ny Nosy.
Araka ny voarakitry ny fandaharanasa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny fanjakana naroson’ny Praiminisitra nanoloana ny solombavambahoaka dia havaozina ny Foiben’ny Paositra Malagasy eo Antaninarenina izay vinavinaina ho vita amin’ny taona 2020.
Havaozina koa ny biraon’ny Paositra miisa dimampolo sy roanjato (250) manerana an’i Madagasikara.
Mikasika ny “e-Paiement” dia hisy fiara-miasa amin’ny Sampandraharaham-panjakana, orinasa ary tranom-barotra lehibe maro eto Madagasikara. Ny tanjona dia ny hahatratrarana mpanjifa ny Paositra Money miisa telo hetsy (300.000) ao anatin’ny roa taona (2021).
dimanche, 18 août 2019 18:15
Sehatry ny indostria: Tanàna efatra hametrahana Zones d’Emergence Industrielle (ZEI)
Hatomboka any Moramanga, Taolagnaro, Antsirabe ary Mahajanga ny fametrahana ny Zones d’Emergence Industrielle (ZEI). Hatsangana ao anatin’ny enim-bolana ny Agence de Gestion des ZEI mba hahafahana mametraka ny paikady ho an'ireo karazana Zone Industrielle eto Madagasikara.
dimanche, 18 août 2019 18:10
Fandoavana karama: Sampandraharaha maromaro no hosokafana
Hosokafana alohan’ny faran’ny taona 2019 ny sampandraharaha misahana ny fandoavana karaman’ny mpiasam-panjakana sy ny volan’ny zokiolona ao Mananjary, Betroka, Mananara-Avaratra, Bekily, Beloha, Mahanoro, Mandritsara ary Analalava.
Ny taona 2020 no hanokafana ny any Anosibe an’Ala, Nosy Varika, Ambatofinandrahana ary Morondava.
« Perception Principale » ny ao Betroka sy Mananara-Avaratra ary « Trésorerie Générale » kosa ny ao Mananjary sy Morondava.
dimanche, 18 août 2019 18:08
Toekarena: 7% ny fiakaran’ny harinkarem-pirenena ho tratrarina
Ato anatin’ny telo taona ho avy no hanatraran’ny Fanjakana ankehitriny ny tanjona 7% ny fiakaran’ny hari-karem-pirenena, ary ho 15% ny tahan’ny fampidiran-ketra hotratrarina amin’ny taona 2023.
Ivotoeran’ny fadin-tseranana miisa 4 ihany koa no hosokafana ny taona 2019-2020 dia ny ao Mananjary, Analalava, Maroantsetra ary Mananara Avaratra.
Misy amin’ireo toeram-pamonjana ireo no tsotra, toy ny hatsangana any Sambava sy Fianarantsoa, ary misy kosa ireo matevim-piambenana ho an’ireo nahavita heloka bevava mamoafady, hatsangana ao Imerintsiatosika (Antananarivo) sy any Ikelivondraka (Ihosy). Hohavaozina sy hitarina ny fonjan’i Tsiafahy sy ny any Moramanga.
Hisy, amin’ny taona 2020, ny fanamboarana fonja tsotra any Manjakandriana, Vohémar ary ao Antananarivo Avaradrano.
Hovatsiana fitaovam-piadiana vaovao ireo mpandraharahan’ny fonja ary hampiana ireo fiara fitondrana voafonja, mialohan’ny faran’ny taona 2019. Harahi-maso amin’ny alalan’ny «caméra de surveillance» ny fonjan’Antanimora, ny fonjan’i Toamasina, ary ny Fitsarana ambaratonga voalohany any amin’ireo toerana ireo.
Hisy fanorenana Tobim-pamaharana vaovao an’ny Tafika an-dranomasina ao Taolagnaro. Hisy ihany koa ny fanamboarana ivon-toeram-pampianarana manokana miisa roa (2) ho an’ny Tafika andranomasina, dia ao Antsiranana sy Mahajanga.
Hanomboka amin’ity taona 2019 ity, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, ary ho tohizana izany amin’ny taona ho avy sy ny manaraka.